Momba anay - SHENZHOU CITY YAAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.
Shenzhou Yaao Pump Industry Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny kojakoja fantsona avo lenta avo lenta, kojakoja fantsona nalentika, ary firakofana hydrocyclone, mampiditra R&D, famokarana sy varotra. Manana traikefa amin'ny famokarana mihoatra ny 20 taona izy. Nanolo-tena hanome fanoherana avo lenta sy vokatra vita amin'ny fingotra avo lenta ho an'ny mpampiasa manerantany.
Ny faritra misy ny paompy slurry an'ny orinasanay dia azo ovaina tanteraka amin'ny faritra vita amin'ny paompy slurry pump malaza eran-tany.
Vary vita amin'ny voajanahary (nafarana avy any Malezia, Singapore & Thafiand), R26, R33, R08, S01 (EPDM), S10 (NBR), S12 (Nitrile), S21 (Bromobutyl), S31 (Hypalon), S42 (Neoprene).
Photo gallery Photo Manana tahiry fitehirizana ampy sufficient
Bobongolo fingotra avo lenta
Izahay no mpiara-miasa antoka aminao ho an'ny vahaolana azo antoka sy mifantoka amin'ny valiny. Ny tanjonay dia ny hampitombo be ny fahombiazanao sy ny fahombiazanao amin'ny vidiny. Ny serivisinay dia afaka manampy ny mpanjifa hampihena ny vidin'ny fandidiana, handamina ny fikolokoloana ary hampihena ny ora fihenam-bidy. Ny fiaraha-miasa aminay sy ny mpanjifa dia miha-akaiky hatrany ary maharitra izahay ary manolo-tena hanome serivisy bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny asa sy ny tombom-barotra.
Fahitana & soatoavina
Ny YAAO dia miezaka ny ho mpitondra tsy azo iadian-kevitra amin'ireo indostria rehetra arosonay. Mangataka fankatoavana eran'izao tontolo izao ny kalitaon'ny vokatra sy serivisinay, ny fomba fanavaozana anay ary ny fanoloran-tenanay vahaolana maharitra. Ny paikadim-pitomboantsika dia miorina amin'ny fahombiazan'ny asa, ny vokatra ary ny fitarihana injeniera ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka.
Nandritra ny taona maro niainan'ny indostria sy ny fahalalana fampiharana teo ambanin'ny vokatray, ny manampahaizana anay dia miara-miasa amin'ny mpanjifa tsirairay hamantatra ny vahaolana tsara indrindra. Mampifanaraka ny teknolojianay izahay mba hahatratrarana ny fitakianao ary hiantohana ny filàn'ny serivisy ho tohanan'ny asa tsara indrindra sy ny asa tsy misy olana.